Diyaaradaha diyaaradaha u ah diyaarinta 3D v4?
Diyaaradaha diyaaradaha u ah diyaarinta 3D v4? 1 sano 6 bilood ka hor #1334
Waa salaaman tihiin P3D v4 dhowr bilood oo aad raadineysay Douglas propliners oo ka shaqeyn doonta v4. Waxaan hayaa c47 / DC3. Nasiib kuma lihi DC4 / 6 ama 7s oo awood u leh inaad shaqeyso. Waxaan jeclaan lahaa in la helo xoogaa DC-6Bs oo ka shaqeyn doona v4!
Diyaaradaha diyaaradaha u ah diyaarinta 3D v4? Bilood 3 2 todobaad ka hor #1718
Hi. Miyaad isticmaashay Noratlas-ka? Waxaan u arkaa inay tahay tan ugu bilaashsan ee bilaashka ah abid. Sidoo kale Douglas C47 Skytrain waa gabal farshaxan ah, laakiin Noratlas waa waajib! (Waxaan ku daray Pilot Auto ah)